भारतमा एकैरातमा हजारौ नयाँ संक्रमित थपिए, १३४ को निधन – Nepal Insider
काभ्रेमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु
आज १७ सयले घट्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति पुग्यो ?
परिवारलाई पाल्न मलेशिया गएका दिपक उपचारका क्रममा सबैलाइ छोडेर बिदा भए !
को’रोना सं’क्रमित क्याप्टेन लामा भन्छन्, यो रोगलाई सामान्य नठान्नु
“कुलमानलाई हटाए जिन्दगीभरलाई नेपाली जनाताको मन रुन्छ” वरिष्ट कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ
कुलमानलाई पूरानो पद दिन नमिल्ने भए त्यो भन्दा माथिको पद दि’इयोस्”
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/भारतमा एकैरातमा हजारौ नयाँ संक्रमित थपिए, १३४ को निधन
भारतमा एकैरातमा हजारौ नयाँ संक्रमित थपिए, १३४ को निधन
भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमितको संख्या बिहीबारसम्म ७८ हजार ३ जना पुगेको छ । गत २४ घण्टामा भारतमा थप ३ हजार ७२२ जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएका स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतमा बुधबार एक दिनमा १३४ को निधन भएको र यसपछि प्रकोपबाट निधन हुनेहरुको सख्या २ हजार ५४९ जना पुगेको छ । यस संक्रमणबाट निको भएका बिरामीको संख्या २६ हजार २३५ जना रहेको पनि सो मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भारतमा बिहीबार बिहानसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हाल यो रोगका ४९ हजार २१९ जना संक्रमितहरु अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्
कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी महाराष्ट्रका नागरिक संक्रमित भएका छन् । यहाँमात्र २५ हजार ९२२ नागरिक कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् । महाराष्ट्रपछि गुजरात दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यहाँ ९ हजार २६७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेका छन् भने तमिलनाडू ९ हजार २२७ संक्रमति रहेका छन् । दिल्लीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको संख्या ८ हजार नाघेको छ ।
कोराना भाइरसको (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएपछि भारत सरकारले देशव्यापी लकडाउनलाई थप दुइ साताको लागि लम्बाएको थियो । भारतले गत मे ४ देखि लागू हुने गरी थप दुइ साताको लागि तेस्रो चरणको लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भारतमा पहिलो चरणको लकडाउन २४ मार्चमा लगाइएको थियो । दोस्रो लकडाउन १५ अप्रिलमा शुरु भएको थियो । दोस्रो लकडाउन मे ३ मा सकिदै थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण देशभरी बढ्दै गएपछि दोस्रो लकडाउन नसकिदै तेस्रो लकडाउन मे १७ सम्मको लागि घोषणा गरिएको थियो ।
‘वादा रहा सनम’ जस्ता चर्चीत गीत लेखेका वरिष्ठ भारतीय गीतकार अनवर सागरको निधन
कोरोना कहर बिच पाकिस्तानमा आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु
भारतीय सेनाको टोली चिनियाँ सेनाको नियन्त्रणमा
भर्खरै राजधानी बिमानस्थल नजिकै ९८ मानव सहित खस्यो विमान [ भिडियो सहित]
चीन र भारतको सीमामा विबाद बढेका बेला नेपाल आउँदै चिनियाँ सेना